အပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
အပင်သည် အပင် လောက (Plantae kingdom) တွင် ပါတွင်သော သက်ရှိ (living) ရုပ်စု (organism) ဖြစ်သည်။ အပင်များတွင် တွေ့နေကြ ရုပ်စုများဖြစ်သော သစ်ပင် (tree)၊ ရိုးပျော့ပင် (herb)၊ ခြုံပင် (bush)၊ မြက်၊ နွယ်ပင်၊ မှို၊ ရေညှိ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ လက်ရှိခေတ်အချိန်ကာလအထိ လေ့လာမှုများအရ အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၅၀,၀၀၀ ရှိသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက အတည်ပြုထားသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၄-ခုနှစ်က ဆိုလျှင် ၂၈၇,၆၅၅ သာ သိခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ metaphytes သို့ viridiplantae (အစိမ်းရောင် အပင်များ) သည် သူတို့၏ စွမ်းအင်များကို နေရောင်ခြည်မှ ရယူပြီး ၎င်းကို ဖိုတိုစင်းသစ်စစ် ဟုခေါ်သည်။
အရစ္စတိုတယ်သည် သက်ရှိများကို အပင် (များသောအားဖြင့် မရွေ့သော)နှင့် သတ္တဝါ (အစာရှာဖွေရေးအတွက် လှုပ်ရှားတတ်သော) ဟူ၍ ခွဲခြားသည်။ Linnaeus ၏ စနစ်တွင် ၎င်းတို့သည် အပင်လောက(Kingdoms) နှင့် သတ္တဝါလောက ဟု ဖြစ်လာသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ အပင်ကို ဖန်ဂျီ၊ ရေညှိ စသည့် သိပ်မဆိုင်သော အုပ်စုများပါ ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် လောက အသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို နည်းပညာ နှင့် လက်တွေ့မှာပါ အပင် အကြောင်းများတွင် ထည့်သွင်းဆဲပင် ဖြစ်သည်။
အပင် လောက တစ်ခုကို သိပ္ပံအမည် ပေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်သုံးခုမှ တစ်ချက်ချက် ပါဝင်သည်။ အနည်းဆုံးမှ အများဆုံး ပါဝင်နိုင်မှုအတိုင်း စဉ်ရလျှင် -
မြေပေါက်ပင် (land plant)၊ Embryophyta သို့ Metaphyta ဟုလည်း ခေါ်သည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားပြန်သည်။
အစိမ်းရောင် အပင် (green plant) - Viridiplantae, Viridiphyta သို့ Chlorobionta ဟုလည်း သိသော - တွင် အထက်ပါ Embryophytes၊ Charophyta (ရှေးဦး ကျောက်ကပ်ပင်) နှင့် Chlorophyta (အစိမ်းရောင် ရေညှိများ) တို့ ပါဝင်သည်။ ဤမျိုးပေါင်းစုသည် ဤအကြောင်းအရာ၏ အဓိက တင်ပြရင်း ဖြစ်သည်။
Archaeplastida - sensu lato အပင်၊ Plastida သို့ Primoplantae ဟုလည်း သိသော - တွင် အစိမ်းရောင် အပင် များနှင့် Rhodophyta (ရေညှိနီ) နှင့် Glaucophyta (ဂလူကို့ ရေညှိ) တို့ ပါဝင်သည်။ အကျယ်အားဖြင့် ဤအုပ်စုတွင် ရှေးခေတ်က cyanobacteria ဖြစ်ခဲ့သော် chloroplasts ဖြစ်လာသည့် eukaryote အများပါဝင်သည်။
တရားဝင် မဟုတ်သော်လည်း အခြား ဖိုတိုစင်းသစ်စစ် လုပ်သော သတ္တဝါ များကိုလည်း အပင် ဟုခေါ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် မျိုးခွဲရာတွင် အပင်နှင့် ခြားနားသည်။ မျိုးစိတ် ပေါင်း ၃၇၅,၀၀၀ ကျော် ရှိပြီး နှစ်စဉ် တိုးပွားလျက်ရှိသည်။
Kunstformen der Natur (၁၉၀၄) မှ ရေညှိမျိုးဝင်
ရေညှိ (algae) အများစုမှာ အပင် လောက ဟု မသက်မှတ်တော့ပေ။"Raven 2005" ရေညှိတွင် ဖိုတိုစင်းသစ်စစ် နည်းဖြင့် စွမ်းအင် ရယူသော မျိုးမတူသည့် ရုပ်စုများစွာ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့၏ မျိုးရိုး (ancestor) မှာ မတူညီသော ဖိုတိုစင်းသစ်စစ် မဟုတ်သော မျိုးရိုး များမှ ဆင်းသက်လာကြသည်။ အများသိ ရေညှိများမှာ အပင်များနှင့်တူသည့် ပင်လယ် ရေညှိ (seaweeds) ဖြစ်ပြီး အစိမ်း၊ အနီ နှင့် အညို ရေညှိ ဟူ၍ ရှိသည်။ ၎င်းအုပ်စု အသီးသီးတွင် ဆဲလ် တစ်ခုတည်းပါဝင်သည့် ရုပ်စု များလည်း ပါဝင်သည်။
↑ "Green algae and the origin of land plants" (2004). American Journal of Botany 91 (10): 1535–1556. doi:10.3732/ajb.91.10.1535. PMID 21652308.
↑ Kenrick၊ Paul; Crane၊ Peter R. (1997)။ The origin and early diversification of land plants: A cladistic study။ Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press။ ISBN 978-1-56098-730-7။
↑ "The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists" (2005). Journal of Eukaryote Microbiology 52 (5): 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. PMID 16248873.
↑ Margulis, L. (1974). "Five-kingdom classification and the origin and evolution of cells". Evolutionary Biology 7: 45–78.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပင်&oldid=744187" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။